Fanjakan'Imerina - Wikipedia
Ny Fanjakan'Imerina (nanomboka tamin'ny taona 1787 ka nifarana tamin'ny taona 1897) dia fanjakana nanapaka ny faritra afovoany sy ny faritra maro hafa teto Madagasikara nadritry ny taonjato faha 19. Antananarivo no renivohiny. Taty aoriana io fanjakana io dia nitondra ny anarana hoe na Fanjakan'i Madagasikara ary ireo mpanjaka nitondra tao dia nitonon-tena ho "mpanjakan'i Madagasikara".
Ny Fanjakan'Imerina dia nipoitra tamin'ny andro nanjakan-dRalambo tamin'ny taonjato faha-16, eo amin'ny faritra avaratra atsinanan'Imerina ankehitriny. Ny mpanjaka voalohany araka ny lovantsofin'ny Ntaolo dia nanjaka tao Imerina tany amin'ny taonjato faha-12. Tamin'izany fotoana izany, ny faritra andrefan'Imerina, izay nitondra ny anarana hoe Imamo, dia fanjakana ihany koa, fa mbola lehibe noho Imerina. Afaka eninjato taona dia lasa tokana ny fanjakan'Imerina tamin'ny andro nanjakan' Andrianampoinimerina tamin'ny faran'ny taonjato faha-18. Tamin'ny andron' Andrianampoinimerina no nipoiran'ny atao hoe "fokontany". Nofoanan'ny Repoblika Frantsay ny Fanjakana Merina tamin'ny fandresen'ny Frantsay tamin'ny Ady Hova-Frantsay izay nifarana tamin'ny 1895, ary lasa zanatany frantsay i Madagasikara, ary i Gallieni no governora.
2 Mpahita an'i Madagasikara voalohany
3 Ny foko merina
4 Ny fanjakan'Imerina
5 Ny vokatry ny kolontsaina eoropeana sy ny Fanjakan'i Madagasikara
Araka ny fikarohana nataon'ireo arkeôlôga, jenetisianina, mpandinika fiteny ary tantarata, ny ankamaroan'ny mponina malagasy dia avy amin'ny tamba-nosy indonezianina. Tonga teo amin'ny morontsiraka andrefan'i Madagasiakra tamin'ny alalan'ny lakan-jejo tamin'ny taonjato faha-4. Ireo mponina ireo dia antsoina hoe Ntaolo. Ireo atao hoe Ntaolo ireo dia niparitaka eran'i Madagasikara: misy ireo atao hoe Vezo izay nijanona teo amin'ny morontsiraka, ary ireo Vazimba izay lasa nipetraka eny amin'ny tany avo, izay mbola be ala tamin'ny andron'ny Ntaolo.
Ny fanjakan'Imerina[hanova | hanova ny fango]
Ny vanimpotian'ny Merina dia tamin'ny taonjato faha-17 hatramin'ny taona 1895, izay nandimby ny vanimpotoan'ny Vazimba.
Nanomboka tamin'ny taonarivo faharoa, ireo Vazimba izay mipetraka eo amin'ny tany avo, dia nandray vahiny avy any avaratra (Arabo avy any Omàna, Persana avy any Shiraz) ary tatsinanana (Maley, Javaney, Boginesa) izay nitambatra tamin'ny Vezo sy ny Vazimba, amin'ny alalan'ny fanambadiana. Ny fahatongavan'ireo vahiny ireo teto Madagasikara dia nanova lalina ny fiainan'ny foko vazimban'ny tany avo (izay antsoina koa hoe Hova na Ambaniandro). Tamin'ny nahatongavan'ny vahiny teto Madagasikara no nipoiran'ny fanjakana merina, ny fanjakana betsileo, ny fanjakana bezanozano ary sy ny fanjakana bara.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-16 ny fampiraisana ny teny hoe "Merina", tamin'ny andron' Andriamanelo, hova-vazimba iray ary mpandova an-dRafohy, mpanjakan'i Alasora. Ny zanak' Andriamanelo, atao hoe Ralambo (1575-1600), tamin'ny alalan'ny fanambadiany ny zana-dRabiby dia namorona ny fanjakan' Imerina Roa Toko, manana faritra roa. Nanaraka azy i Andriamasinavalona (1675-1710) izay namorona ny fanjakan'Imerina Efa-Toko manana faritra efatra. Tamin'ny nanjakan' Andrianampoinimerina (1778-1810) ilay fanjakan'Imerina Efa-toko vao tena tanteraka. Ny zanaka sy mpandimby an' Andrianampoinimerina, atao hoe Radama I (1810-1828), dia nanan-tanjona ny hamorona ny fanjakan'i Madagasikara.
Ny vokatry ny kolontsaina eoropeana sy ny Fanjakan'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
En Imerina, des Vazimba aux Andriana - J-P Domenichini ary Bakoly D-Ramiaramanana
↑ Ny fihavian'ny mponina malagasy, amin'ny fiteny frantsay
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanjakan%27Imerina&oldid=980776"
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2020 amin'ny 08:29 ity pejy ity.